Home Wararka Beesha Ceyr oo maanta si dhoolus ciidan ah ku soo dhaweeysay C/raxman C/Shakur!...
Beesha Ceyr oo maanta si dhoolus ciidan ah ku soo dhaweeysay C/raxman C/Shakur! (Video)
Waxaa maanta si heer sare ah loogu soo dhaweeyay siyaasiga Cabdiraxaman Cabdishakur. Iyada oo ay jirto cabsi in RW Kheyre uu ciidan u soo diro soo dhaweeynta C/raxaman si loo carqaladeeyo ayaa waxaa beesha Ceyr iyo guud ahaan beesha Habar Gedir waxa ay la soo baxeen in ka badan 10 gawaarida dagaalka ee loo yaqaano tiknikadda iyo gawaarida ay ku xiran yihiin qoryaha lidka diyaradaha.
Ciidanka maanta soo dhaweeyay C/rixmaan C/shakuur ayaa ahaa kauwo ka soo baxay xarumaha ciidanka iyaga oo horay u soo qaatay Gawaari ay ku asteeysan yihiin calaamadaha ciidanka Qaranka.
Talaabada maanta ay qaaday beesha uu ka dhashay C/raxaman C/shakuur aya waxa ay fartiin u dirtay Madaxweyne Farmaajo taas oo ahayd in hadii sharci lagu wada joogi waayo waxaa lagu wada joogaa awood. Taliyaga ciidana aya sheegay in ciidanka soo dhaweeyay isla hadana ilaalinaya C/raxman C/shakur ay amar la’aan uga soo baxeen xaruumahooda tilaabana laga qaadi doono.
waxaan shak ku jirin in RW Kheyre uusan markaan ku soo degdegi doonin guriga Siyaasiga C/raxaman C/shakur didii uu horay u sameeyay.
Halkaan ka daadwo video soo dhawaynta C/raxaman Cabdishakur:
Previous articleWarqad kasoo baxday xafiiska MW Farmaajo oo lagu go’doominayo dhaqdhaqaaqa Gud. Mursal
Next articleXasanadii xildhibaanada oo caawa lagu tuntay albaabadana laga xirtay (Video)
31 kun oo arday oo Maanta markii Labaad Imtixaan u fadhiisatay